Nhau -Matanhatu makuru maitiro anokanganisa kudyara mubhatiri blister yekurongedza zvishandiso
Matanhatu makuru maitiro anokanganisa kudyara mune nyowani bhatiri blister yekurongedza zvishandiso
Maererano nemushumo mutsva, zvikamu zvitatu zvebhateri blister packaging device vakapindura vakati makambani avo anotarisira kuita mari yekudyara mumwedzi inotevera ye12-24, zvichida nekugadzirisa maturusi ekare kana kutenga michina mitsva.Idzi sarudzo dzichatungamirirwa ne teknolojia, automation. nemirau, pamwe nemutengo uye kudzoka pakudyara.Mitemo nekuvhiringika kunokonzerwa neCOVID-19 zvakakonzerawo kudiwa kwemidziyo yemhando yepamusoro uye yepamusoro.
Automation: Inodarika makumi matanhatu muzana yebhatiri blister yekurongedza uye makambani ebasa ane hukama akati kana vakawana mukana, vanozosarudza kuita otomatiki, uye kuwana kure kunowedzera kudiwa.
Kambani iri kuisa mari mumichina yepamberi kuti iwedzere kumhanya kwekurongedza uye kushanda zvakanaka.Mienzaniso yeotomatiki yekugadzira mutsara michina inosanganisira:
· Iyo yekunyora sisitimu inosungirira-kutenderedza firimu kana mapepa marebhu kumidziyo nekumhanya kunosvika 600+ paminiti.
· Fomu-Zadza-Chisimbiso Technology, iyo inoshandisa chidimbu chimwe chete chekugadzira midziyo yepurasitiki, kuzadza midziyo uye kupa zvisimbiso zvinodzivirira mhepo yemidziyo.
· Nekuda kweiyo tamper-proof kukosha uye yakaparadzana yakasimba chisimbiso, otomatiki blister packaging michina iri kuramba ichizivikanwa.Automatic blister packaging inovandudza kushanda kwemutsara wekugadzira uchichengetedza kuenderana uye kunaka.
· Tekinoroji yedhijitari, Internet yeZvinhu, uye blockchain vari kubatsira makambani kubatanidza michina yavo kumidziyo yakangwara, kugadzirisa uye kushuma kukanganisa, kugadzirisa mashandiro, kuwana ruzivo rwe data pakati pemichina, uye kunyora pasi rese rekutengesa cheni.
Kuzvitonga kwave kwanyanya kuwanda, saka kugadzirwa kwemajekiseni ega-jekiseni nemajekiseni ekare-akazadzwa akawedzera.Kambani iri kuisa mari mukuunganidza nekuzadza michina kuti iwane kukurumidza shanduko yenguva kune dzakasiyana-siyana autoinjectors.
Mishonga yemunhu ari kutyaira kudiwa kwemichina inokwanisa kurongedza mabhechi madiki ane nguva pfupi yekutungamira. Mabhechi aya anowanzoda kurongeka uye nekukurumidza kurongwa nemugadziri wemishonga.
Digital packaging iyo inotaurirana zvakananga nevatengi kuve nechokwadi chekutarisa kurapwa uye kugadzirisa mhedzisiro yekurapa kwemurwere.
Nekuwedzera kunoramba kuchiwedzera kwemhando dzezvigadzirwa, makambani ekurongedza ari kuwedzera kuda kugadzirwa kwakachinjika umo michina inogona kuchinjwa kubva kune chimwe chigadzirwa saizi kuenda kune chimwe. saizi, uye mafomula, uye inotakurika kana diki-batch michina inozove maitiro.
Sustainability ndiyo inotarisa kumakambani akawanda nokuti vanoda kuderedza marara uye kuwedzera kudhura kwemari.Packaging yave yakanyatsoenderana nemamiriro ekunze, nekunyanya kukoshesa zvinhu uye kushandiswa zvakare.
Kuti uone bhatiri blister kurongedza otomatiki, kurongedza uye zvigadzirwa mhinduro, ndapota tarisa rumwe ruzivo mune yedu webhusaiti.